» नकाउटमा टिम राजुबाट को हुनेछन् उत्कृष्ट ३ प्रतियोगीहरु ?
नकाउटमा टिम राजुबाट को हुनेछन् उत्कृष्ट ३ प्रतियोगीहरु ?
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ११:४१
मकवानपुर, १५ जेठ । चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भोईस अफ नेपाल सिजन ३’ को नकाउट राउण्ड छिट्टै प्रसारण हुँदैछ । स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै ब्याटल राउण्ड सकिएपछि प्रसारण रोकिएको यो शोको नकाउट राउण्ड यो साता अथवा अर्को सातासम्ममा आउने अपेक्षा छ । ब्याटलबाट हरेक कोचले एकजना स्टिल सहित ९–९ जना प्रतियोगीहरु अगाडि लिएर गएका छन् । तर अब नकाउट राउण्डमा निर्णायकहरुको निक्कै सकसपूर्ण निर्णय हुनेछ । किनभने ती ९ जना प्रतियोगीहरु अब नकाउट राउण्डमा ३–३ जनाको समूहमा आफ्नै टिमका प्रतियोगीहरुसँग भिड्नेछन् । आफ्नै टिमका प्रतियोगीसँग भिडेर जित हासिल गरेका ३ जना प्रतियोगी मात्र लाईभ राउण्डमा प्रवेश गर्नेछन् भने ६ जना बाहिरिने छन् । यसरी चारै जना कोचहरुबाट ३–३ जना प्रतियोगीहरु गरी जम्मा १२ जना प्रतियोगीहरु लाईभ राउण्डका लागि प्रवेश गर्नेछन् । यस भिडियो सामग्रीमा कोच राजुको टिमबाट नकाउट जित्दै लाईभमा जानसक्ने प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । द भोईस अफ नेपाल सिजन ३ को अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
कोच राजुको टिमबाट तारा श्रीस मगर, उर्मिला कुसुण्डा, नविन गजमेर, सन्दिप राई, सोनाम ग्याल्सो शेर्पा, सम्राट राजभण्डारी, विजय मगर, गणविर बुढा मगर र स्टिलबाट आएका ध्रुव तामाङले नकाउटमा भिड्नेछन् । कोच राजुको टिममा रहेका ९ जना प्रतियोगीहरुमध्ये ४ जना प्रतियोगीहरुले ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका थिए । तारा श्रीस मगर, उर्मिला कुसुण्डा, नविन गजमेर र सन्दिप राईले ब्लाईण्ड अडिसनमा चारैजना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका थिए । उनीहरुले ब्याटलमा पनि तहल्का मच्चाउँदै नकाउटका लागि छनौट भएका थिए । यस अर्थमा हेर्दा कोच राजुको उत्कृष्ट ३ मा यी ४ जना प्रतियोगीहरुको ठूलो सम्भावना छ । तारा श्रीस मगर सर्वाधिक चर्चामा रहेकी प्रतियोगी पनि हुन् ।
उनको ब्लाईण्ड अडिसनको प्रस्तुति द भोईस ग्लोबलमा मार्च महिनाको उत्कृष्ट प्रस्तुतिका रुपमा छनौट हुन सफल भएको थियो । तारा बाग्लुङमा जन्मिएकी हुन् । त्यस्तै उर्मिला कुसुण्डा कोच राजुको टिमको अर्का चर्चित प्रतियोगी हुन् । उनी दाङ घोराहीकी हुन् । लोापोन्मुख जाति कुसुण्डा समुदायबाट अगाडि बढेकी उर्मिला थोरै जनसंख्या रहेको कुसुण्डा जातिबाट एक्लो प्रतिनिधिका रुपमा भोईसमा आईपुगेकी हुन् । कोच राजुको टिममा रहेका सिक्किमका नविन गजमेर पनि उत्कृष्ट ३ मा पुग्ने बलिया हकदार हुन् । यसअघि सिजन २ मा पनि उनले तहल्का मच्चाएका थिए । स्टेजमा स्याण्डी राईका नामले परिचित सन्दिप राई कोच राजुको उत्कृष्ट ३ मा पुग्नसक्ने अर्का बलिया प्रतियोगी हुन् । शोलुखुम्बुका स्याण्डी अहिले संगीत सिक्दै छन् । उनी गीतकार समेत हुन् ।
ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल यी ४ प्रतियोगीहरुबाहेक पनि कोच राजुको टिममा सोनाम ग्याल्सो शेर्पा, सम्राट राजभण्डारी, विजय मगर, गणविर बुढा मगर र स्टिलबाट आएका ध्रुव तामाङ जस्ता एकसेएक प्रतियोगीहरु पनि छन् । सोनाम ग्याल्सो शेर्पा बौद्ध काठमाडौँका हुन् । उनी गायनका साथै गीत लेखनमा पनि अग्रसर छन् । त्यस्तै चाबाहिलका सम्राट राजभण्डारी सांगितिक परिवारमा नै हुर्किएका प्रतियोगी हुन् । सानैदेखि संगित क्षेत्रमा रहेकाले उनले नकाउटमा तहल्का मच्चाउने सम्भावना बलियो छ । धनकुटा हिले बजारका विजय मगर कोच राजुका अर्का आसलाग्दा प्रतियोगी हुन् । सानैदेखि गायनमा लागेका र सिम्फोनी ब्याण्डमा पनि आवद्ध रहेका उनी उत्कृष्ट ३ मा पुग्ने सम्भावना ठूलो छ । ब्लाईण्ड अडिसनदेखि नै दर्शकको मन जितेका रोल्पाका गणविर बुढा मगरले पनि नकाउटमा तहल्का मच्चाउने छन् । स्थानीय स्तरमा नै गायन शोहरु जितेका गणविर पनि कोच राजुबाट लाईभमा पुग्ने बलियो प्रतियोगी हुन् । त्यस्तै कोच प्रमोदबाट कोच राजुले स्टील गरेका ध्रुव तामाङ पनि कोच राजुको उत्कृष्ट ३ मा पुग्नसक्ने अर्का प्रतियोगी हुन् । उनी नुवाकोटका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–